मंगलग्रहबाट सेल्फी खिच्दै क्युरिओसिटी रोभरले भन्यो – म काममै ‘बिजी’ छु ! – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured मंगलग्रहबाट सेल्फी खिच्दै क्युरिओसिटी रोभरले भन्यो – म काममै ‘बिजी’ छु !
मंगलग्रहबाट सेल्फी खिच्दै क्युरिओसिटी रोभरले भन्यो – म काममै ‘बिजी’ छु !
तस्बिर क्रेडिट : NASA/JPL-Caltech/MSSS
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले झण्डै झण्डै आशा मारिसकेको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगलग्रहमा पठाएको क्युरिओसिटी रोभर निष्क्रिय नभएको पाइएको छ ।
नयाँ सेल्फी पठाएसँगै रोभर अहिले मंगलग्रहको नयाँ क्षेत्रमा गइरहेको छ । रातो ग्रहका रुपमा चिनिने मंगलको नयाँ तस्बिरले धूलोको आँधीपछि त्यहाँको समतल क्षेत्र पहिलेभन्दा प्रदूषित देखिएको पनि बताइएको छ । अहिले रोभरले माउन्ट शार्पको माटोयुक्त क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न लागेको छ ।